အမေဇုံနှင့်ဂူဂဲလ်တို့တိုက်ခိုက်ခြင်းကိုမရပ်တန့်ပါ။ အသိုက်ထုတ်ကုန်များသည် Amazon မှပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မည် Gadget သတင်း
အမေဇုံနှင့်ဂူဂဲလ်သည် ဆက်လက်၍ တိုက်ခိုက်နေသည်။ အသိုက်ထုတ်ကုန်များသည် Amazon မှပျောက်ကွယ်သွားမည်
အင်တာနက်ကုမ္ပဏီကြီးနှစ်ခုအကြားရှိစစ်ပွဲသည်ဘယ်တော့မျှအဆုံးသတ်မည်မဟုတ်ဟုထင်ရသည်။ ထိုစာငှက်တကောင်ကိုမျှတိတ်ဆိတ်စွာမနေရ။ နောက်ဆုံးပေါ်တည်ဆောက်မှုကတော့ Nest ဌာနခွဲ - ထုတ်ကုန်များသည်အိမ်သုံးအလိုအလျောက်အာရုံစူးစိုက်သည်။ စီးပွားရေးအရရရှိနိုင်တော့မည်မဟုတ် အွန်လိုင်း ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး.
Google နှင့် Amazon တို့ပထမဆုံးအကြိမ်ကြုံတွေ့ရခြင်းမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်စစ်ပွဲတစ်ခုဖြစ်သည်၊ ၎င်းကိုသင်ဖြေလျှော့ပေးခြင်းထက်သင်ဆွဲထုတ်သော အကယ်၍ ဂူဂဲလ်ဝန်ဆောင်မှုများကိုအမေဇုန်ကွန်ပျူတာများတွင်မရရှိပါကကျွန်ုပ်တို့ဆိုလိုသည်မှာ YouTube ဆိုသောဗီဒီယိုဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည် streaming များ အင်တာနက်ပေါ်တွင်လူကြိုက်အများဆုံး - ယခုအမေဇုံသည်တိုက်ခိုက်နေသည် အသိုက်ထုတ်ကုန်ရောင်းချခြင်းကိုရပ်တန့်ပေါ်တယ်ကနေဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း business Insider.
Nest catalog မှထုတ်ကုန်အနည်းငယ်ကို Amazon တွင်ရောင်းချသည် စမတ်အပူထိန်းကိရိယာ, အ ကုန်ပစ္စည်းမရှိပါ။ နှင့်အနည်းငယ်သောအခြားထုတ်ကုန်။ ဒီအသင်းတွေဟာ Amazon ကမ်းလှမ်းမှုကနေချက်ချင်းပျောက်ကွယ်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။ သို့သော်သတင်းများအရ အမေဇုံသိုလှောင်ရုံများမှစတော့ရှယ်ယာများပျောက်ကွယ်သွားသည်နှင့်အမျှ၎င်းတို့ကိုဖုံးအုပ်ထားတော့မည်မဟုတ်.
ဤဆုံးဖြတ်ချက်အားလုံးကိုကုမ္ပဏီနှစ်ခုလုံး၏ကိုယ်စားလှယ်များမှပြုလုပ်သောအစည်းအဝေးတစ်ခုတွင်လူသိများပြီးထိုအမည်တွင်တိတိကျကျဖော်ပြထားခြင်းမရှိပေ။ အရာရာတိုင်းကဘီဇို့စ်ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်တာဝန်ရှိသည်ဟုဖော်ပြသည်။ အမှန်မှာဂူးဂဲလ်သည်ဤကဏ္inတွင်အမေဇုန်ဘက်သို့ ဦး တည်နေသည်မှာမှန်သော်လည်းအခြားတစ်ဖက်တွင်အငြင်းပွားဖွယ်မရှိသောခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေဆဲပင်။ သို့သော်လက်ထောက် Google Assistant သည်အခြားကုန်အမှတ်တံဆိပ်များမှပစ္စည်းကိရိယာများတွင်ပိုမိုရောက်ရှိလာသည်မှာလည်းမှန်ကန်သည်။ ပြီးတော့ဒါက Alexa နဲ့သူ့မတူညီတဲ့ Amazon Echo မော်ဒယ်တွေကိုပျက်စီးစေနိုင်တယ်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်အိမ်တွင်းအလိုအလျောက်ကဏ္ sector သည် Amazon အတွက်အလွန်အရေးကြီးကြောင်းကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့သတိပြုမိသည်။ ဒါ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ကအွန်လိုင်းကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးကုမ္ပဏီကြီးရဲ့နောက်ဆုံးဝယ်ယူမှုနဲ့ပြသနိုင်ပါတယ်။ ၎င်းကို iRing စမတ်သော့ခတ်သူများနှင့်ပြုလုပ်သည်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » NOTICIAS » အမေဇုံနှင့်ဂူဂဲလ်သည် ဆက်လက်၍ တိုက်ခိုက်နေသည်။ အသိုက်ထုတ်ကုန်များသည် Amazon မှပျောက်ကွယ်သွားမည်
ဤရွေ့ကား MWC ပြီးနောက်ရရှိနိုင်သောအကောင်းဆုံး mid-range မိုဘိုင်းဖုန်းများဖြစ်သည်
Song Maker - ကိုယ်ပိုင်ဂီတဖန်တီးရန် Google ၏ကိရိယာအသစ်